Ciidamada Booliska oo soo dhoweeyay balan qaadkii Raysal wasaaraha | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada Booliska oo soo dhoweeyay balan qaadkii Raysal wasaaraha
Muqdisho (KON) Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay balanqaadkii Raysal wasaaraha Soomaaliya eek u aadanaa in hal bil oo mushaar dheeraad ah la siiyo ciidamada booliska dhamaadtood.
Qaar ka mid ah ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo la hadlay Keydmeda Online ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin balanqaadka Raysal wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale waxay sheegeen in Munaasabada xuska aas aaska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ay wax badan ka duwaneed sanadadii hore isla markaana sanadkaan la gaaray horumar dhinac walbo ah.
Raysal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa amray in ciimada booliska Soomaaliya la siiyo Hal bil oo mushaar dheeraad ah dhamaantood, xili uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xiligaan waxay si toos ah u qaataan mushaaraadkooda xili aysan markii hore si joogto ah aysan yu heli jirin.